ကိုင်ပြီးရင် …………. လက်ဆေးပါ ……… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကိုင်ပြီးရင် …………. လက်ဆေးပါ ………
ကိုင်ပြီးရင် …………. လက်ဆေးပါ ………
Posted by fatty on Aug 24, 2010 in Creative Writing | 11 comments
ကိုယ့် ပေါင် ကို ကိုယ်လှန် ထောင်း သလို တော့ ဖြစ်တော့ မှာပါ ဘဲ ။………..
မတတ် နိုင် ဘူး လေ ………….။
အခြေအနေ အရကိုး ………။
ကိုင်ပြီး ရင် တော့ လက်ဆေးပြီးမှ အစားအသောက် ကို ကိုင်တွယ် ပါ။
ကိုင်ပြီးရင် မေ့ပြီး လက် ကို ပါးစပ် ထဲ မထဲ့မိပါစေနဲ့…………. ။
ဗက် တီး ရီးယား တွေ အများကြီး ရှိ နိုင် ပါ တယ် ………….။ ဒေါင်း နေ လို့ ၁ ပုံ့ ဘဲ့ တင် လိုက် ရတယ်…။
ကျန်းမာရေးအတွက် အဲဒါ အရမ်း အရေးကြီးတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီလို အကြွေလေးတွေတောင် လိုအပ်သလောက် မရနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ပိုက်ဆံ အမ်းခါနီးဆို အနီး အနားဆိုင်ကလေးတွေဆီ လိုက်မေးပြီး အကြွေရှိလား မေးကြရတယ် ဈေးသည်အချင်းချင်း ငါဆီက ဟာ နင်ကြီး အမ်းယူသွားတော့ ဘာနဲ့ ဈေးရောင်းမလဲ ဆိုပြီး တခါတလေ အချင်းများမှုတွေတောင် ကြားခဲ့ရဘူးတယ်
ဟုတ်တယ်ဗျာ… နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အသုံးပြုနေရတာ၊ တစ်ခါတစ်လေ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ ထည့်တုန်းက အကောင်းပဲ၊ ပြန်ထုတ်လို့ ပြဲသွားပြီး သုံးမရတော့တာလဲ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါပဲ၊ လိုင်းကားစီးနေရတဲ့လူတွေ အများဆုံး ကြုံကြတယ်၊ မလွယ်ပါဘူး၊ တစ်ချို့တွေဆို မှိုတွေတောင် ပါသေးတယ်၊ အရမ်း စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတယ်ဗျာ… မသုံးလို့လဲ မရဘူး၊ မရှိမကောင်း၊ ရှိမကောင်း ဖြစ်လာမယ်နဲ့ တူတယ် ပိုက်ဆံ အဟောင်းတွေရယ်
ဟုတ်ပ… ဒါတွေကို အစိုး၇က လဲလှယ်ပေးသင့်တယ်… တစ်ခါတစ်ခါအကြွေမ၇ှိတာတော်တော်ဒုက္ခေ၇ာက်တယ်ဗျာ……
လှည့် မကြည်တာ တွေကို အရေးလုပ်မနေနဲ့
အခုလည်းလူတွေ သကြားလုံးတွေ၊ အချဉ်ထုတ်တွေနဲ့လုပ်နေနိုင်တာနဲ့အတူတူ ပုဂ်ဂလိကဘဏ်တခုခုက ဘာလို့တာဝန်မယူသလည်း စဉ်းစားမရဘူး။
ဘဏ်ကနေ ပလပ်စတစ်ပြားမှာ နံပါတ်တွေရိုက်ပေးပြီး အကြွေအဖြစ်ပေးသုံးလိုက်ရင် ဘဏ်က သုံးစွဲသူအများဆုံးဘဏ်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စပဲ..။
ဒါမှမဟုတ် ကျုပ်ပဲ ဒေါ်လာပဲစိတွေ တူနဲ့ထု ပုံဖျက်ပြီး သွင်းပေးလိုက်ရကောင်းမယ်ထင်တယ်။
သကြားလုံးတွေ၊ အချဉ်ထုပ် တွေ မအမ်းရဘူးဗျ…။ အဲလို အမ်းရင် တိုင်လို့ ရပါတယ်တဲ့.. သို့သော်ညား..ဘယ်သူက မှ မတိုင်ပါ.. (အားနာတတ်ချင်း မြန်မာ့ စိတ်ရင်း ဆိုတော့)။ အဲလိုလုပ်မယ် ဆို ရင် ကိုယ်ပိုင် ငွေကြေး (ငွေကြေးအစားထိုး ပစ္ဒ္စည်း) သုံးသလို ဖြစ်သွားနိုင်လောက်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရ က သာဒီလိုလုပ်ခွင့် ရှိတာမို့ …. ပါရမီ စိန်ဂေဟာ မှာ အဲလို သဘောရှိတဲ့ တုံကင် တွေ လုပ်ဖူးပါတယ်။ ၂ ပတ်လောက် အကြာမှာတော့ ပြန်ရုပ်သိမ်း လိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော့ တစ်ယောက်ထဲ ရဲ့ အမြင်ပြောရရင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဥပဒေသ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိမှသာ ဖြစ်နိုင်လောက်တယ် လို့ …။ တစ်ဒေါ်လာကို ၈၀၀ လို့ တရားဝင် ပြောပြီဆိုတော့ မဝေးတော့ပါဘူး လို့ပဲ…။
ကျနော်ကြားတာကတော့ ငွေအကြွေတွေက ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်နဲ့ မကာမိလို့ အသစ်မထုတ်တော့တာ ဆိုပဲ …..
အဲလိုသာဆို ဘယ်ချိန်ထိ ဒီငွေအစုတ်တွေနဲ့ ဆက်ပြီး စခန်းသွားနေရ ဦးမှာလဲ မသိဘူး ….
အကြွေမကိုင်ဖူးတဲ့ လူတန်းစားတွေကတော့ ဒီဒုက္ခတွေကို သိမှာ မဟုတ်လောက်ဘူး ….
နေ့တိုင်း အကြွေ့ ၊ အကြွေ ၊ အကြွေး နဲ့ မကင်းနိုင်တဲ့ လူတွေမှာသာ …….
လက်ကလည်း အကြွေကိုင်တိုင်းသာ ဆေးရမယ် ဆိုရင် ကြောပိုးအိတ်ထဲကို ရေဘူးနဲ့ ဆပ်ပြာ သွားလေရာ ဆောင်သွားမှ ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျို့။
နှစ်ရက်ကို ဆပ်ပြာတစ်ခဲလား . . .
အမှန်ဆုံး ၊ အဖြစ်သင့်ဆုံး ပါဘဲ ။
ပိုက်ဆံ ဆိုတာ အစုတ်အဟောင်းအနွမ်း ရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး ။
အသစ်ဆိုရင်လဲ ကိုင်ပြီး လက်ဆေး သင့်ပါကြောင်း ၊ ဦးဖက်တီး အတိုင်းပါ ။
သူတောင်းစား ပေးရင်ခွက်နဲ့မရိုက်ရင် ကံကောင်း
tv မှာကြော်ငြာတယ်လေ လက်ဆေးပြီးပြီလား
ခုတော့ အဲသလောက်စုတ်တာတွေ မတွေ့တော့ဘူးဗျ….။ ပြောင်းလဲလာပြီ…။ ပြောင်းလဲလာပြီ …..ပြောင်းလဲ…………အဲ……….အကျယ်ကြိးအော်ရဲဖူး…။